နံရံကပျကျွွောငာ 12.07.2018 24.07.2018 interesnenkoe, ချက်ပြုတ်နည်းများ
ကျနော်တို့အမှိုက်ထဲမှာပစ်နှင့်ဗြိတိသျှစားဖိုမှူးအများဆုံးခံထိုက်ဟင်းလျာများမှဆက်ပြောသည်။ ထိုမျှမကသူတို့စျေးပေါဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျွန်တော်ဖြုန်းတီးနေကြသည်။ အကြောင်းမူကား, ထိုသူတို့ကအပေါင်းတို့၏အားသာချက်ယူဖို့ဘယ်လိုသိသောကြောင့်။
ကျနော်တို့စွန့်ပစ်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားရာ၏တာအံ့သြဖွယ်အရသာနဲ့အရသာရှိပါတယ်, စဉ်းစားပါ အကောင်းဆုံးကိုစားဖိုမှူးဗြိတိန်။ သူတို့ကထုတ်ဝေသူအဆိုပါဂါးဒီးယန်းနှင့်အတူ shared လျှို့ဝှက်ချက်များ။
အဆိုပါ solidified မုန့်ဖုတ်၏အနောက်၌ သာ. စိတ်ဝင်စားဖို့ဟင်းလျာများချက်ပြုတ်ဖို့တှနျ့ဆုတျပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်ပေါင်မုန့်, ခရမ်းချဉ်သီး, ခေါင်းလောင်းငရုတ်ကောင်း, ကြက်သွန်, သံလွင်ဆီ, စပျစ်ရည်ကိုရှာလကာရည်နှင့်အီတလီဟင်းသီးဟင်းရွက်ပါဝင်သောတစ် Tuscan မုန့်နှင့်ခရမ်းချဉ်သီးဟင်းချို "Pappa အယ်လ် Pomodoro" နှင့်နွေရာသီသုပ် "panzanella" ။
မနေ့ကရှေ့တော်၌ထို နေ့မှစ. ပေါင်မုန့်ကိုလည်း bruschetta ပါစေ။ ယခုပင်လျှင်သွေ့ခြောက်, ဒါပေမယ့်မုန့်ကိုမပေးမှိုချပ်သံလွင်ဆီနှင့်ဒယ်အိုးထဲမှာကြော်နှင့်သမားရိုးကျပေါင်မုန့်ကင်ရာမီးဖိုကလေးထဲတွင်အခြောက်။ ပြီးတော့မုန်များအတွက်အခြေခံအဖြစ်သူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။
ကျနော်တို့မုန်လာဥနှင့် beets ထိပ်သုံးစွဲဖို့နေသားတကျဖြစ်လာကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်သူကသေးဂေါ်ဖီထုပ်အားဖြင့်ထိုအတူလုပ်ဖို့သင်ယူမထားပါဘူး။ သို့သော်သူမသည်အခြားကဲ့သို့သောစွယ်စုံဟင်းသီးဟင်းရွက်, အထူးသဖြင့်အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းဂေါ်ဖီ၏အရွက်ကိုသူတို့ pies များအတွက်ဖြည့်ပါ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နံ့သာမျိုးနှင့်တကွဆီကြော်နှင့်သီးခြားပန်းကန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြည်ပမှာ, သုပ်ဖို့အထူးအရသာပေးပါ။
ကပြုတ်လျှင်, ပန်းဂေါ်ဖီတွင်လုံလောက်သောသိပ်သည်းကိုက်ညီမှုဆီးကျိတ်ကင်ဆာ, နှင့်အရသာချိုမြိန်။ ကနေဿုံ caramel ငံပြာရည်အထဲကပြန်သွားလေ၏။
ဟာဆလဗ်များသောအားဖြင့်ကြွယ်ဝသောဟင်းရည်များအတွက်ကြက်သားအရိုးတို့သထားခဲ့ပါ။ သို့သော်ဗြိတိသျှတို့ကဒီအဘို့မသာဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြက်သား Ridge လှော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အနီရောင်စပျစ်ရည်နှင့်ပြင်ဆင်ထားသည်။ နက်ရှိုင်းသောပြုတ်ပြီးရင်ကြော်နှင့်ပထမဦးဆုံးအရာခပ်သိမ်းမှာ။ ထူထပ်သောနီးပါးတစ်ဦးဂျုံယာဂုလိုပဲဟင်းချိုဖို့နောက်ဆုံးအလှည့်မှာတော့နံ့သာမျိုးကို add ပါကမယုံနိုင်လောက်အောင်မွှေးပြန်သွားလေ၏။
သံပုရာဖျော်ရည်ကိုအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်, သံပုရာပျော့ဖတ်ကနေဖျစ်ညှစ်အချိုရည်နှင့်အသုပ်ဖြည့်စွက်, နှင့်ခွံပစ်နေကြသည်။ ထိုအချည်းနှီး။
Zest သုံးနိုငျ: ပါးလွှာချပ်သို့ဖြတ်အိုးတလုံးထဲသို့သွင်းထားလေ၏, ဆားနှင့်ဖြန်းပြီးရက်အနည်းငယ်စိမ်ထားခဲ့။ ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရာသီ, အရသာ, ထူများနှင့်ပျော့ပြောင်းပြီးသံပုရာမြည်းစမ်းဖို့သီးဖျော်ရည်များနှင့်ကိုက်ညီမှုထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ Brit ဒီပန်းကန်တစ်ခုသီးသန့်အရသာပေးရ feta ဒိန်ခဲနှင့်သံလွင်သီးနဲ့ငါးပိထဲသို့ထည့်ပါ။
ငါတို့အဘို့အစင်ကြယ်ခြင်းနှင့်ဖု, inedible စွန့်ပစ်သည်။ ဗြိတိသျှစားဖိုမှူးများအတွက် - ထိုဟင်းလျာများ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများကို။
သူတို့ဟာငယ်ရွယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အရေပြားအောက်မှာဗီတာမင်၏အကြီးမြတ်ဆုံးပမာဏကိုစုဆောင်းသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ နှင့်အညီ, ကညွတ်ခွံ၏သုပ်လုပ်တှနျ့ဆုတျပုမုန္လာဥနီ, မုန်လာဥထိပ်များ, beet, ဆလရီ, leeks ၏အစိမ်းရောင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလက်သည်းပါဘူး။ သူတို့ရဲ့အနိမ့်အဆီအချဉ်မုန့်နှင့်အတူဖြည့်ပါ, မြည်းစမ်းဖို့ parsley, cilantro, ပင်စိမ်း, tarragon ထည့်ပါ။